Sida loo Waraaqda YouTube Audio fudayd
> Resource > YouTube > Sidee Macdan Audio ka YouTube Effortlessly
Waxaad ka heli kartaa tan ah ilaha audio in videos music ama macmal ah videos on YouTube. Waxa ay noqon doontaa fikrad wanaagsan in la soo saaro YouTube audio in ay dhegeystaan ​​marka aad ku biiro ama muhu internetka. Laakiin aad ka heli kartaa waxa qayb ka ah gumaarka ah lagu soo saaro audio ka YouTube online. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, halkan waa YouTube shawladda ah audio wanaagsan in cawinaada Streaming taariikhqorihii Audio . By isticmaalaya barnaamijkan, waxaad ka heli kartaa files audio aan khasaaro tayada halka video la ciyaaro. Uma baahnid in aad marka hore soo bixi video YouTube ah ka dibna waxaa loogu badalo in ay qaab maqal ah. Aan iska baarto ku sugan qodobadiisa soo socda.
1 Ku rakib YouTube shawladda audio
Download version saxda ah ee barnaamijka iyo rakibi on your computer. Habka rakibidda wuxuu noqon doonaa welwel la'aan ah la saaxir ah. Waxaan isticmaali doonaa version daaqadaha sida tusaale.
2 Waraaqda audio ka YouTube online
Ka dib markii ay ku rakibidda barnaamijka, waxa ay u ordaan heli button Record barnaamijka a. Guji button ka dibna uu dedeg website YouTube ee in la helo ilo maqal ah. Riix audio YouTube ay ku ciyaaraan iyo barnaamijka bilaabi doonto ka shaqeynta.
Ka dib markii audio la soo saaro, waxaad ka heli kartaa in tab ka Library. Muujinta file maqal ah oo guji badhanka dar Lugood in. Markaas waxaa si playlist SAR ku Lugood, kuwaas oo aad u hagaagsan karaan qalabka aad la qaadi karo sida iPod ama dadka kale tegi doonaa. Waxa kale oo aad xaq u-riixi kartaa file maqal ah oo dooro Add to Lugood Library in menu pop-up ah.
Kale oo ka aaladaha Apple, kaliya aad u baahan tahay inaad xaq u-riix audio iyo dooran Open ee Folder si aad u ogaato meesha file waxaa loo kaydiyaa. Markaas faylka wareejiyo qalabka la qaadi karo sida Samsung telefoonka gacanta.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa tan YouTube shawladda audio inuu u ciyaaro files audio. Samee playlists inay guraan files si aad si deg deg ah ka heli kartaa mid ka saxda ah.
Iyada oo barnaamijkan, waxa kale oo aad ka dhigi kartaa ringtones si fudud. Riix icon dawan iyo bitmap a tusi doonaa. Si fudud u dooran qayb ka mid ah in bitmap iyo in lagu shubaa telefoonka badbaadiyo.
Sidoo kale waxaan u leeyihiin in la xuso in aad edit karaa macluumaad ah ee faylka maqal ah oo ay xaq u-ilamaha iyo xulashada View Detail. Markaasuu ku qor warbixinta kartoo khaanadda saxda ah.
La yaabka leh, miyaanay ahayn? Ha ka waaban inaad kala soo baxdo mid si aad u hagaajisid waayo-aragnimo audio.